शेयर बजार ०.६४ प्रतिशत घट्यो | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर शेयर बजार ०.६४ प्रतिशत घट्यो
मुख्य खबर, लगानी 8 views
शेयर बजार ०.६४ प्रतिशत घट्यो
पुस ३०, काठमाडौं । पहिलो त्रैमासको अन्तिम दिन शेयर बजार घटको छ । दोश्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणको पर्खाइमा रहेका लागनीकर्ताहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको विश्लेषण गरिएको छ । जसका कारण साताको पहिलो कारोबार दिनमा नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ६४ प्रतिशतले घटेको हो । यस दिन शेयर बजार ९ दशमलव १९ अङ्कले घटेर १ हजार ४ सय ३१ दशमलव १० विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ ।
अघिल्लो काराबार दिनको तुलनामा यस दिन कारोबार रकम न्यून प्रतिशतले घटेर रू. ३२ करोड ८३ लाख पुगेको छ भने बजार पूँजीकरण घटेर रू. १६ खर्ब ७१ अर्ब पुगेको छ । यस दिन ‘क’ वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन सेन्सेटिभ इण्डेक्स शून्य दशमलव ४९ प्रतिशतले बढेर ३ सय २ दशमलव २० अङ्क पुगेको छ । जलविद्युत र ‘अन्य’ समूह बाहेक बाँकी समूहहरूको परिसूचक घटेपछि समग्र शेयर बजार ओरालो लागको हो ।
फरवार्ड कम्यूनिटि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको रू. १ करोड ९३ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । यस लघुवित्त कम्पनीको शेयर मूल्य रू. १ सय २४ ले घटेर अन्तिम मूल्य रू. ३ हजार ३ सय ८१ पुगेको छ । यस कम्पनीको १ सय ७७ पटकको व्यापारमा ५ हजार ६ सय ३८ कित्ता शेयर किनबेच भएको हो । साथै, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सानीमा माई हाइड्रोपावर, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैङ्क, एभरेष्ट बैङ्क, चिलिमे हाइड्रोपावर, नेपाल दुरसञ्चार र बुटवल पावर कम्पनीको रू. १ करोडभन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको हो । चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर मूल्य ६ दशमलव ९५ प्रतिशत बढेर अन्तिम मूल्य रू. ९ सय ५४ पुगेको छ । सेन्ट्रल फाइनान्सको शेयर मूल्य भने ६ दशमलव २९ प्रतिशत घटेको छ ।
जलविद्युत समूहको परिसूचक २ दशमलव ८८ प्रतिशत बढेको छ । अधिकांश जलविद्युत कम्पनीहरूको शेयर मूल्य बढेपछि यस समूहको परिसूचक ५५ दशमलव ३७ प्रतिशत अङ्कले बढेको हो । ‘अन्य’ समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ४७ प्रतिशत बढेको छ । त्यसैगरी, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक १ दशमलव ९४ प्रतिशत, लघुवित्त समूहको परिसूचक १ दशमलव ५१ प्रतिशत, वित्त कम्पनीको १ दशमलव ३३ प्रतिशत र बीमाको १ दशमलव ३१ प्रतिशत घटेको छ । साथै, विकास बैङ्क समूहको परिसूचक १ दशमलव २९ प्रतिशत, होटलको १ दशमलव २१ प्रतिशत र बैङ्किङको शून्य दशमलव ७१ प्रतिशत घटेको हो ।
यस दिन १९ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ । त्यस्तै, १ सय २१ कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ भने १२ कम्पनी स्थिर रहेका छन् । सो दिन १ सय ५२ कम्पनीको ४ हजार २२ पटकको व्यापारमा ६ लाख ७० हजार ६ सय ४५ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ । यस दिन नेप्सेको १४ दिने रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स न्यूट्रल जोन अथवा ४१ दशमलव १२ स्केलमा रहेको छ । यसले बजारमा शेयरको खरीद विक्री चाप सन्तुलन रहेको देखाउँछ । त्यसैगरी, सो दिन नेप्सेको एडी रेशियो भने शून्य दशमलव १५ अङ्क रहेको छ । यसले बजार वियरिश प्रवृत्तिमा रहेको देखाउँछ ।
१३ बैशाख २०७५, बिहीबार १८:३५